INSPIRE intuthuko eYurophu - i-Geofumadas
INSPIRE intuthuko eYurophu
NgoJulayi, 2011 Geospatial - GIS
Uguqulelo lwe Geoinformatics entsha kuzisa isishwankathelo oxabisekileyo ukuba izinto zihamba eYurophu kwi-sikhokelo iphulo ZOMELEZA, inkomfa yonyaka ngoJuni entsha yokugqibela eyayise-Edinburgh. Zonke iingxelo lizwe ziyafumaneka ngonyaka, kodwa eli nqaku indlela umdla ubungaka- ngonyaka 2010, funda ikuvumela ubona ubenemboniselo yangaphezulu yazo yintoni enokwenziwa entsimini Spatial Neziseko Data eyayimenza lommandla .
Iba luxabiseke iibrafu eziqhathaniswayo kwinqaku, apho iSpain ithatha iziqulatho ezimbalwa; nangona ukungalingani kwimeko yayo kunye namanye amazwe angaphantsi "anzima" ngobukhulu, umthetho kunye nenkcubeko.
UMTHETHO WEMPILO (INukutshabalalisa SPatial InfoRsation in Europa) ngumsi womsiza, othabatha iminyaka emininzi kodwa uqala ukuphunyezwa kwi-2007 phantsi kwe-2007 / 2 / EC. Injongo yalo ngumnyaka we-2019 ukuvuma imithetho, imimiselo kunye nezibonelelo ezifikelelekayo kwiinkcukacha zendawo ekusebenziseni kwayo ngokufanelekileyo ekuphuhliseni imigaqo yelizwe laseYurophu. Ekuqaleni ejolise 27 angamalungu, ngaphandle ethintela ifuthe ebilindelekile, ngenxa yokuba ngoku kukho kwi 7 ubuncinane States (EU umlingwa afta) apho zikwamilisela le nkqubo yaye inxaxheba ngokusebenzayo kakhulu ukuba iyonke 34.
Olu hlobo lwenkqubo luye lwabonwa kwezinye iindawo zomhlaba, kubandakanywa naseMerika. Nangona kunjalo, ukubona oko UKUPHILA kuphumelele, ukuqwalasela ubunzima beeprojekthi, kubonisa ukuba kukho umsebenzi onzima.
Uhlalutyo lweGeinformatics luquka ukuhlaziywa kwiinkalo ezintandathu:
Iingcali (Iinkcukacha, imethadatha kunye neeNkonzo) kunye nabangewona ubugcisa (umbutho, imibandela yomthetho kunye nezimali).
Nangona ingxelo nganye isekelwe kumatrix odibeneyo odibeneyo oquka iinkalo ze-9:
Isakhelo somthetho kunye nezimali
Iinkcukacha zeziHlomelo ze-INSPIRE
Idatha ye-Thematic yendalo
Ulungelelaniso kunye nentlangano
Ukusetyenziswa kunye nokusebenza kakuhle kwe-NSDI
Umzobo uvela ekuqaleni kweengxelo, ukumakisha okuluhlaza kwimimandla eye yatshintsha kakhulu ukususela ekugqibeleni kokugqibela ngokubhekisele kwimicimbi ebekwe ngaphambili.
Kufuneka ibe umsebenzi olula, ucinga ukuba amazwe kufuneka uthathe imigaqo-nkqubo nezikhokelo karhulumente uze unike loo umkhondo liphuma izimiso de kwiminyaka embalwa edlulileyo umba geospatial. Kwimeko, indima arhente yemephu yesizwe, ezifana namatyala Institutes Geographical kuye kwafuneka ukuba aye zokuzama kwiindlela ezintsha kunye uxwebhu leyo Cadastral 2014- malunga Ukuhlanganisa abucala nakarhulumente wathi. Masingatsho utshintsho kumthetho weemimandla eziziva ukuba ukuzimela kwabo kuphulwa okanye zibonakala ziyimfuneko ezingekho mfuneko.
Icala laseSpeyin likhankanywe ngokuqinisekileyo ngumzamo owenziwe ngokudibana noorhulumente basekuhlaleni. I-France kunye ne-Italy zikhankanywe, nangona i-merit iya kuDenmark. I-90% yoomasipala bayo badibene kakhulu kwinkqubo. Kwaye ndikhankanya umongo kuba unomasipala base-98, ofana ne-1% yabaseSpain.
Ngaphandle kwinqaku yeGeinformatics, kukho into enokufundwa kuzo kwiingxelo ezahlukeneyo ezivela kwilizwe ngalinye, ukuba nangona ifomathi ehamba phambili isekelwe kumatrix ofanayo, ilizwe ngalinye linamabanga okufaka isandla. Kule ngxelo, ingxelo yaseBelgium, equka ukunyamezela ngokucacileyo kweemaphu kwiimilinganiselo ezahlukileyo, ibetha, njengemimodeli eyahlukeneyo yezohlukeneyo, apho kwezinye iimeko zibandakanya imifanekiso efana neCyprus neNorway.
Enye inkalo apho iSpeyin ibonakala khona ukufumaneka kweenkonzo. Nangona i-Geoportal ayikho imbopheleleko, ingxelo ibonisa ukuba ubuncinane amazwe e-18 anomboniso we-IDEE portal. Lithuania and France ndimi apha, yaye kugxininiswa kwimeko Spain apho kuthiwa kukho ukubandakanyeka zobulungiseleli 7, iingingqi 16, oomasipala 400, 833 WMS, WFS kunye 205 9 CSW.
Ekugqibeleni, INSPIRE ngumzekelo ocacileyo wenzame yommandla yokusebenzisana. Nangona ukunciphisa kweemeko ezithile ezingaboni iziphumo ezikhawulezayo zingathandabuzekiyo, ukungafani phakathi kwamazwe anenkqubo enzima yokubamba umthetho (izikhulu okanye ezopolitiko abangayiqondi loo nto), ukunciphisa izibonelelo ezingundoqo, kukuxabisa umsebenzi ochanekileyo.
Iinkqubo ezifana nalezi ziyimfuneko ebalulekileyo yokugcinwa komzekelo weshishini kwintsimi ye-geospatial. Zombini iinkampani ezivelisa isofthiwe esicinga ukuba le ndawo ibe enye yeemarike ezifanelekileyo, kunye nabanikezeli benkonzo abahlala besemva, kunye ne-OpenSource model ehamba ukufumana indawo kwimarike kwaye apha unento yokuthetha ngokwexabiso lokubambisana okanye ukukhuselwa kwemigangatho.
Ukuba ndihleli kumaspala kunye nokuqhaqhayisa kwendawo, andiyi kufumana ingqiqo kulo moya. Nangona kunjalo, sifanele sifunde phakathi kwemigca, kuba sikhuluma ngomxholo apho ukuthambekela okungenakuphikiswa kuya kuphawulwa khona; Ukuqonda le modeli kusenza sivumelane nezicwangciso zobuchule be-geospatial (njengeBentley hypermodels, i-ArcGIS yokukhuthaza kunye ne-CityGML, ukunika imizekelo emithathu).
Apha ungabona zonke iingxelo ze-INSPIRE
Apha ungabona ingxelo yeGeinformatics
Post edlulileyo«Edlulileyo Umgibe kwimilayezo ebonakalayo ye-Gmail
Post Next Yiba nomthandi onjengaweOkulandelayo "